स्कूल फिर्ता को लागी मूल एजेन्डा क्रिएटिव अनलाइन
स्कूल फिर्ता को लागी मूल एजेन्डा
सेप्टेम्बर सुरुवात र नयाँ रिजोलुसनको महिना हो। हामी जिममा सम्मिलित हुन्छौं, हामी अधिक पानी, नयाँ परियोजनाहरू, आदि पिउने प्रस्ताव राख्छौं। के हामी सबैलाई थाहा छ स्कूल फिर्ता को रूप मा प्रख्यात!
नयाँ महिना, नयाँ रिजोलुसन र नयाँ एजेन्डा। त्यहाँ एउटा भनाइ छ: "छोटो पेन्सिल लामो स्मृति भन्दा राम्रो हो", त्यसैले एजेन्डा आवश्यक हुन्छ जहाँ हामी सबै नयाँ प्रोजेक्टहरू लेख्न सक्छौं र यसले हामीलाई दिनदिनै मिलाउन मद्दत गर्दछ।
तर एजेन्डा बोरिंग वा गम्भीर हुनु आवश्यक छैन। म तपाईं को एक श्रृंखला ल्याउन सक्कली एजेन्डा स्कूलमा फिर्ता राम्रो अनुहार!
बुट एजेन्डा डेल अटोनोमो: डिजाईन स्टुडियो आर्टवर्क आधुनिक Fucks यो बारेमा छ "विनाश प्लस VAT को हतियार" उनीहरूले स indicate्केत गरे जस्तै, स्टीम छोड्नु राम्रो नोटबुक हो। र यसमा कुनै छक्कलाग्दो कुरा छैन कि कसैले पनि भने कि स्वायत्त हुनु सजिलो छ।
आधुनिक गाउँ: यदि तपाइँ विद्यालयलाई विडंबनाको फिर्ता दिन चाहनुहुन्छ भने यो तपाइँको एजेन्डा हो। धेरै हास्यको साथ दैनिक समस्याहरूको हास्यास्पद चित्रणको साथ।
सुनौलो छिमेकी: यदि तपाईं चमक र चमकको प्रेमी हुनुहुन्छ भने, मसँग तपाईंको एजेन्डा छ। उसको आदर्श वाक्य «+ ब्रिलिब्रिली - नाटक» यसले विद्यालयमा फिर्ता जान बढी सहन योग्य बनाउँछ।
कालो राशिफल एजेन्डा: यदि तपाईं ताराहरू र ब्रह्माण्डको प्रेमी हुनुहुन्छ भने, म यहाँ तपाईंलाई तपाईंको एजेन्डा ल्याउँछु। यसमा तपाईं ब्रह्माण्डले तपाईंको लागि भण्डार गरेको सबै कुरा पत्ता लगाउन सक्षम हुनुहुनेछ।
श्री अद्भुत: स्टेशनरी को राजा। तपाईंसँग एक मात्र एजेन्डा छैन, तर छनौट गर्न विभिन्न मोडेलहरूका age एजेन्डाहरू छन्। तपाईंको दिन प्रति दिन रंग, राम्रो कम्पन र एक सकारात्मक उर्जा जोड्नुहोस्।
यी age एजेन्डासँग, स्कूल फर्कनु धेरै सजिलो हुनेछ। अब त्यहाँ तपाइँको उद्देश्यहरू पूरा नगर्ने र तपाइँका सबै अपोइन्टमेन्टहरूका लागि समयमै नभएको लागि कुनै बहाना छैन। त्यसोभए जब तपाईं आफ्नो छोरासँगै सबै स्कूल सामग्रीहरू किन्नुहुन्छ, दुई एजेन्डा किन्नुहोस्, एउटा उहाँको लागि र अर्को तपाईंको लागि।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » स्कूल फिर्ता को लागी मूल एजेन्डा
फोक्सवैगन आफ्नो नयाँ लोगो प्रस्तुत गर्दछ